Egwuregwu kachasị njọ nke ọgbọ a, mpịakọta 1 | Akụkọ akụrụngwa
Anyị nwere ike iji oge ebighi ebi na-ekwurịta banyere ikike nke ọtụtụ aha site n'ọgbọ a ogologo oge, ma a na-enyo enyo ma ọ bụghị, mana na Mundi Videojuegos anyị ga-eme ihe megidere: anyị ga-ekwu maka egwuregwu kacha njọ nke gafere n'aka anyị na ndị a. afọ.
Na nke mbụ a, ihe nkesa ahụ ga-agwa gị banyere ahụmịhe ise ya kachasị njọ n'akụkụ nke ọzọ nke pad ahụ, nwere aha ndị kwere nkwa nke ukwuu ma mesịa bụrụ ihe karịrị ndị na-arịa ọrịa hyp. Were oche ma were ume miri emi - ka anyị banye n'ime nsị nke ọgbọ a.
Achọghị m ịmebe iwu site na iwe kacha elu ruo na nke kachasị ala, n'ihi na eziokwu bụ na agaghị m edocha anya, yabụ ahọpụtara m ịme ndepụta a n'usoro abiidii. Anyị malitere!
Ndị ọbịa: Ndị na-achị obodo
Mmepe nke egwuregwu a kwesiri ihe nkiri egwu, na nsonaazụ ya adịghị mkpụmkpụ. Ndị ọbịa: Ndị na-achị obodo malitere dị ka oru ngo maka PS2 de Lelee Egwuregwu isii ọ ga-ebipụtakwa ya EA. Ka oge na-aga, ikike nke egwuregwu xenomorphs dabara n'aka Sega ma oru ngo a buru oru nke ndi okike Borderlands y Duke Nukem Ruo Mgbe Ebighị Ebi. Asụsụ ndị ọjọọ na-emesi obi ike na ego a natara gearbox site na nke Sega mechara jiri ya ịzụlite Borderlands ma nweta akụ ọgụgụ isi nke Duke Nukem, na-ahapụ mmepe nke Ndị ọbịa: Ndị na-achị obodo na ọkwa adịghịdị mma maka ndị nwere agụmakwụkwọ: ọ dị ka ụlọ ọrụ dị iche iche dị na mpụga mere akụkụ nke egwuregwu ahụ, nke n'ozuzu ya bụ ọgbaghara anyị na-enweta n'ụlọ ahịa.
Egwuregwu nke egwuregwu ahụ bụ ihe nwute - ugbu a a na-arụ ọrụ iji meziwanye ya - egbe egwuregwu na-adịghị mma, onye ọbịa AI na-enweghị atụ, mmemme ahụ jupụtara na chinchi ma ọ nweghị otu oge na njem ahụ kwesịrị otuto. O doro anya na, nnukwu ndakpọ olileanya na isi obodo akwụkwọ ozi na a enweghị ọkachamara ụkpụrụ ọma na akụkụ nke gearbox: ka anyị na-akwado na nyocha anyị, gbanahu egwuregwu a dika o bu ezi xenomorph.
Medal nke nsọpụrụ: Warfighter
Saga Ihe nrịba nke nsọpụrụ Na-eme ka anyị cheta ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị biri na mmalite ya na mmemme izizi a na-agaghị echefu echefu maka añeja PlayStation. Na mbata nke Oku ọrụ 4: Modern Warfare, e nwere tupu na mgbe agha fps genre, na-ahapụ EA na ndò nke Activision. Reboot nke aha ruo oge a nwere nnabata dị :ara :ara: ọ bụ ezie na mmemme ahụ na-atọ ụtọ yana yana mkpọsa dịgasị iche iche, mana ọ kabeghị aka maka ntụpọ ya.
Este Onye agha Ọ dịla njọ site na trailer nke mbụ e gosipụtara ya, ebe, n'agbanyeghị iji Frosbite 2 mara mma, ọ dịchaghị mma ma gosipụta egwuregwu egwuregwu dị oke egwu. Nsonaazụ ikpeazụ dịkarịrị njọ: eserese nwere nkọwa ụfọdụ na - ewepụta hives, obere ọrụ ọgụgụ isi arụ ọrụ - nke kachasị nke ndị mmekọ-, mkpụmkpụ na mgbasa ozi - ihe kachasị ọhụrụ bụ ọkwa ịnya ụgbọ ala, nke nwere oge ịgba ọsọ - yana ọtụtụ egwuregwu nwere ntụpọ. bụ ihe kpatara nke a Onye agha egwuregwu na-asọ oyi: sịkwa ihe ijuanya EA kpebiri ime ka aha a kwụsị.
Dabere na akwụkwọ akụkọ nke otu aha ahụ ma bụrụ ezigbo onye agha US, Dike dike ọ bụ ezigbo skid maka Bethesda. Lọ ọrụ Zombie Anọ m na-ewu mmemme a, rue mgbe onye nọ na Bethesda hụrụ na ọ gaghị abia na mmezu, na maka ihe ụfọdụ, ọ nyefere bọọlụ na oge ụfọdụ. Nnupụisi, Onye kpebiri idebe usoro ihe egwuregwu nke ndị otu gara aga -oe! -. Hụ ihe a hụrụ, Bethesda kpebiri iji gbanyụọ pọmpụ ahụ ma bido ihe ha nwere na ahịa tupu okwu a adịkwuo ọbara.
Ngwaahịa ikpeazụ bụ mmemme nwere oge elekere abụọ, dị ka m na-agwa gị. N'ezie, Dick marcinko ọ bụ ezigbo onye ngosi na obere ahịrịokwu ya, na-ekwughi mkpesa ndị obi ọjọọ na mma dị ọcha na egwuregwu egwuregwu dị mfe ma na-atọ ụtọ. Mana ka anyị kwuo eziokwu, egwuregwu nke oge dị mkpirikpi -mgbe ị chere na Marcinko ga-abọ ọbọ n'ahụ ndị otu ya, ị gaferelarị ụgwọ ahụ- yana iji teknụzụ rụchaa ihe dị anya na ọkwa nke ọgbọ a - ma lezie anya, m anaghị ekwu okwu banyere ọtụtụ egwuregwu n'ihi na ná ndụ m, enwewo m ike ịchọta ọpụpụ-, mee nke Dike dike Ngwaahịa ihere na nke jọgburu onwe ya nke ndị na-egwu ihe nkiri merties nke iri asatọ nwere ike ịchọta ihe na-atọ ọchị.
Afọ Iri na Otu Mutja Ninja Turtles: Turtles na Timen Re-Shelled
Ma ọ bụ na ndị ọzọ okwu, otú ịghasa a kpochapụwo. Ndị anyị bụ ndị bụbu ndị agha lagoro ezumike, anyị na-echeta nnukwu egwuregwu ahụ nke pụtara na arcades na nke gbanwere ya SNES, tinyere ọkwa larịị gụnyere, ọ bụ ezie na ọ kwadoghị ndị na-emekọrịta ihe ruru ihe egwuregwu 4. Ọ bụ ezie na, na ejiji nke relaunching ochie maka ọrụ dijitalụ na Microsoft y Sony, Ubisoft nwere echiche ịkpọlite ​​n'ọnwụ Ntị na Oge site na iji eserese eserese na egwuregwu: emeghari oge o ruru ha.
Onye ọ bụla maara na ị na-ebufe egwuregwu nke ụdị egwuregwu a na akụkụ atọ, na ndị ọzọ na-abịa site na aha site na oge 16-bit, dị nnọọ mgbagwoju anya nakwa na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu n'oge ahụ abụwo fiasco zuru ezu. N'ebe ọwụwa anyanwụ Ndi mbe Time Re-echekwa abụghị otu: mgbe ha na-ahazigharị egwuregwu ahụ na 3D, ha chere na ọ ga-adaba adaba iji kwadebe mbe ahụ na mmegharị na ntụziaka 8 kama nke 4 dị na nsụgharị nke mmalite 90. Mkpebi a rụpụtara njikwa siri ike nke na-egbochi nnukwu nsogbu ihe egwuregwu, ya mere, ihe egwuregwu nke egwuregwu. Na mgbakwunye, na n'agbanyeghị na-enwe ekwenye maka ihe ruru anọ egwuregwu, mgbakwunye nke katrij nke SNES.
Ndị ogbenye Denis dyack, president nke Ndị Knight Silicon, ahụhụ ndị insufferable mepụta egwuregwu a mix nke edinam na RPG, nke na ya premiere na dị ka Yalọ «ọ bụ nnukwu egwuregwu vidio, ọ ga-abụ na ọ dị mma karịa ọtụtụ n’ime ndị na-apụta n’afọ a. Na mgbakwunye ọ dị m ka ọ bụ egwuregwu kachasị mma anyị meworo”. Okwu nwoke a bu akuko ocha di omimi: njehie eserese, igwefoto na-egbuke egbuke, njiri mara ma sie ike, onye protagonist na-enweghị charisma na akụkọ na-etinyeghị aka. Oke mmadu n’olulu e chefuru echefu.
Na mbido, ọ bụ mmemme diski atọ echere maka nke mbụ PlayStation, mgbe ahụ, ebigharị mmalite ya site na usoro dị iche iche, rue mgbe ọ mechara nwee nkwekọrịta Microsoft iji malite ya Xbox 360 dị ka nanị na trilogy na, inwe obi abụọ na ya nke ukwuu, agatụghị enwe ihe na-aga n'ihu, na ọnụ ahịa mmepe nke egwuregwu ahụ dị elu. Oke mmadu ghọrọ ọdịda na nyocha na ahịa, ma nke ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, Ndị Knight Silicon na-alụ ọgụ megide iwu Epic Games na-ekwu na ya enyeghị ya nkwado zuru oke iji mesoo ya Emeghieme Engine 3, nke metụtara arụmọrụ na mmepe nke egwuregwu ahụ. Efuola ikpe ahụ Ndị Knight Silicon, nke gbochiri ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ maka ego ma jiri nwayọ na-anwụ na ndị ọrụ 5 na ndị ọrụ, gụnyere Denis dyack, na-enwe olile anya imechi mmechi ikpeazụ, belụsọ na mmadụ bịara inye aka na-amụ ihe site na iji ezigbo akwụkwọ nleba anya.
Ruo ugbu a nke mbụ nke ụmụ atụrụ ojii nke ọgbọ a. Obi abụọ adịghị ya na anyị ga-eji nhọrọ ọhụrụ laghachite iji soro gị tụlee akara aka ọzọ iji gbapụ ka a ga-asị na ọ bụ ekwensu. Hụ gị n'ime Mundi Videogames.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Videogames » Egwuregwu kachasị njọ nke ọgbọ a, mpịakọta 1
Ọtụtụ gbalịrị ihichapụ ihe ncheta ọjọọ ahụ, mana ọ ka bụ akụkụ nke akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ a, n'ezie.
Zaghachi na User234